UShamsi uveza okwenyusa ifomu yakhe
U-TABRAIZ Shamsi umshwibi wamaProteas osenza kahle emidlalweni yeT20 ne-Ireland Isithombe: BACKPAGEPIX
UMSHWIBI wamaProteas, uTabraiz Shamsi, uthi ukuchitha isikhathi esiningi enkundleni yikhona okwenza ifomu yakhe iqhubeke nokukhuphuka.
UShamsi uthathe amawikhethi amane iqembu lakuleli lidla i-Ireland ngama-run angu-33 emdlalweni wokuqala weT20 ngoMsombuluko.
Njengamanje nguyena obashaya emakhanda bonke abashwibi emhlabeni emidlalweni yeT20. Umshiya ngamaphuzu angaphezulu kuka-100 uRashid Khan wase-Afghanistan, olele endaweni yesibili.
"Ngaphambilini bengidlala umdlalo owodwa, kuphinde kudlule isikhathi ngidlale emibili noma emithathu. Ngaqala kanjalo eqenjini lesizwe kodwa kwakufanele ngoba ngangisemusha," kusho uShamsi.
"Angingabazi ukuthi ukudlala imidlalo eminingi ilandelana yikona osekwenze ukuthi ngifike kuleli zinga. Ngithola isikhathi esanele sokubhekisisa amaphutha engiwenzayo, ngiphinde ngithole nethuba lokuwalungisa enkundleni. Okusemqoka ukusebenza ngokuzikhandla. Sisazofika nesikhathi lapho izinto zingeke zingihambele kahle khona, ngiyosizwa ukuthi ngikhumbule ukuthi naso sizodlula, ngiqhubeke nomsebenzi wami."
Ukunqoba kwamaProteas emdlalweni wokuqala kuwabeke ethubeni lokuthi angalusonga lolu chungechunge lwemidlalo emithathu njengoba ezophinde abhekane ne-Ireland kowesibili ngoLwesine ngo-5 ntambama.
Umdlalo uzobanjelwa eStormont Cricket Ground, eBelfast. Le nkundla izobe isetshenziswa okokuqala kulolu chungechunge. Imidlalo emithathu yosuku olulodwa, nowokuqala weT20, idlalwe eMalahide Cricket Ground, eDublin.
Umdlali we-Ireland, uMark Adair, unethemba lokuthi bazozibuyisa izinduku, bawavimbe amaProteas ukuthi anqobe kusasele umdlalo wokugcina.
"Ngikhule ngidlala kuyona le nkundla yaseStormont. Umdlalo wokuqala engawubuka, owawuphakathi kwe-Ireland ne-England, wawudlalelwa khona. Kuzoba mnandi kakhulu ukubuyela kuyo futhi sithokozela nokubakhona kwezihlwele
"Akulula ukudlala imidlalo yeT20 kodwa siyazi ukuthi ukuba saqeda kahle ngesikhathi sibhetha kowokuqala, ngabe kukhulunywa okunye. Kufanele sizenzele izinto zibe lula, ngeke sishintshe okuningi, sidinga ukubambisana njengeqembu," kusho u-Adair.